ဟဒီးဆ်: မွတ်စလင်မ်တစ်ဦးအပေါ်တွင် ကျရောက်လာသည့် ပင်ပန်းမှုဝေဒနာဖြစ်စေ၊ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းနာကျင်မှုဖြစ်စေ၊ (ဖြစ်လာမည့် ကိစ္စရပ်ကိုကြိုတွေးပြီး) ပူပန်မှုဖြစ်စေ၊ (ဖြစ်ပြီးသွားသော ကိစ္စရပ်အပေါ်တွေးတောပြီး) စိုးရိမ်မှုသောကဖြစ်စေ၊ နောက်ဆုံး ဆူးစူးသည်ပင်ဖြစ်စေ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ယင်းအရာများကို အကြောင်းပြု၍ ထိုသူ၏ အပြစ်များကို ပြေပျောက်စေတော်မူသည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: မွတ်စလင်မ်တစ်ဦးအပေါ်တွင် ကျရောက်လာသည့် ပင်ပန်းမှုဝေဒနာဖြစ်စေ၊ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းနာကျင်မှုဖြစ်စေ၊ (ဖြစ်လာမည့် ကိစ္စရပ်ကိုကြိုတွေးပြီး) ပူပန်မှုဖြစ်စေ၊ (ဖြစ်ပြီးသွားသော ကိစ္စရပ်အပေါ်တွေးတောပြီး) စိုးရိမ်မှုသောကဖြစ်စေ၊ နောက်ဆုံး ဆူးစူးသည်ပင်ဖြစ်စေ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ယင်းအရာများကို အကြောင်းပြု၍ ထိုသူ၏ အပြစ်များကို ပြေပျောက်စေတော်မူသည်။
အမျိုးအစား: ထွတ်မြတ်မှုများနှင့် အာဒါဗ်စည်းကမ်းများ။ . ထွတ်မြတ်မှုများ။ . သောင်ဟီးဒ်၏ ထွတ်မြတ်မှုများ။ .
အဗူစအီးဒ်နှင့် အဗူဟုရိုင်ရဟ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟုမာ)တို့က တမန်တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)ထံမှ ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ မွတ်စလင်မ်တစ်ဦးအပေါ်တွင် ကျရောက်လာသည့် ပင်ပန်းမှုဝေဒနာဖြစ်စေ၊ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းနာကျင်မှုဖြစ်စေ၊ (ဖြစ်လာမည့် ကိစ္စရပ်ကိုကြိုတွေးပြီး) ပူပန်မှုဖြစ်စေ၊ (ဖြစ်ပြီးသွားသော ကိစ္စရပ်အပေါ်တွေးတောပြီး) စိုးရိမ်မှုသောကဖြစ်စေ၊ နောက်ဆုံး ဆူးစူးသည်ပင်ဖြစ်စေ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ယင်းအရာများကို အကြောင်းပြု၍ ထိုသူ၏ အပြစ်များကို ပြေပျောက်စေတော်မူသည်။
မွတ်စလင်မ်တစ်ဦးအပေါ်တွင် ကျရောက်လာသည့် ရောဂါများ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၊ သောကများ၊ ၀မ်းနည်းပူဆွေးမှုများ၊ ပြသနာများ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခများ၊ ကြောက်ရွံ့မှုနှင့် စိတ်မသက်မသာဖြစ်မှုများသည် ၎င်း၏ အပြစ်များကိုပြေပျောက်စေပြီး၊အမှားများကို ပယ်ဖျက်ပေးသည့် အရာများသာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ လူတစ်ဦးသည် ထိုအရာများအပေါ် (ဆွဗ်ရ်)သည်းခံခြင်းနှင့် အကျိုးကုသိုလ်အား မျှော်လင့်ခြင်းတို့ကိုပါ ထပ်တိုး၍ပြုလုပ်ခဲ့လျှင် အပြစ်များပြေပျောက်ခြင်းနှင့်အတူ အကျိုးကုသိုလ်လည်း ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဘေးဒုက္ခများသည် နှစ်မျိုးရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ လူတစ်ဦးထံ ဘေးဒုက္ခဆိုက်ရောက်လာသည့်အခါ အကျိုးကုသိုလ်အား သတိရ၍ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံမှ ကုသိုလ်ရမည်ဟု မျှော်လင့်ချက်ထားပါက ထိုဆိုက်ရောက်လာသည့် ဘေးဒုက္ခပေါ်တွင် အကျိုးနှစ်ခု ရရှိလိမ့်မည်။ ၁- အကုသိုလ်များ ပယ်ဖျက်ခံရခြင်း၊ ၂- အကျိုးကုသိုလ်များ တိုးပွားခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ၎င်းသည် (ဆွဗရ်)သည်းခံခြင်းကို လျစ်လျူရှုထားလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် စိတ်ကျဉ်းကြပ်မှုဖြစ်ပြီး ပင်ပန်းငြီးငွေ့မှု သို့မဟုတ် အလားတူအရာများ ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ ထို့ပြင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံမှ အကျိုးကုသိုလ်ရရန် ရည်စူးချက်ကိုလည်း လျစ်လျူရှုထားသည်။ ဤသို့ဆိုလျှင်လည်း ထိုစိတ်သောကရောက်စရာကိစ္စများသည် ၎င်းသူ၏ အပြစ်များကို ပယ်ဖျက်ပေးမည်ပင်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ၎င်းသည် အခြေအနေတိုင်းတွင် အကျိုးရရှိသူပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကုသိုလ် မရရှိသော်လည်း သူ၏အပြစ်များ ပယ်ဖျက်ခံရခြင်းနှင့် အကုသိုလ်များ ပလပ်ခံရခြင်းဟူသည့် အကျိုးကိုရရှိမည်ပင်ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူသည် မည်သည်ကိုမျှ ရည်းစူးခဲ့ခြင်းမရှိသလို သည်းခံခြင်းမထားရှိဘဲ အကျိုးကုသိုလ်ကိုလည်း မမျှော်လင့်ခဲ့ပေ။ သို့မဟုတ်ပါက ၎င်းသည် တင်ပြခဲ့သည့် အတိုင်းပင် အပြစ်များကို ပယ်ဖျက်ခံရခြင်းနှင့် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်မှ ကုသိုလ်ရရှိခြင်း စသည့်နှစ်ချက်စလုံးဖြင့် အကျိုးခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူသားသည် ဒုက္ခရောက်သည့်အခါ အကယ်၍ ဆူးစူးလျှင်ပင်ဖြစ်စေ ထိုဒုက္ခပေါ်တွင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်မှ အကျိုးကုသိုလ်ရရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း သတိရရန်လိုအပ်သည်။ သို့မှသာ အပြစ်အကုသိုလ်များ ပယ်ဖျက်ခံရခြင်းနှင့်အတူ အကျိုးကုသိုလ်များ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည် ချွတ်ယွင်းမှုအပေါင်းမှ ကင်းစင်တော်မူပြီး ကြီးကျယ်မြင့်မားတော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ နိအ်မသ်၊ ကျေးဇူးတော်နှင့် ရက်ရောတော်မူခြင်းတို့ပင်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ အရှင်မြတ်သည် မုအ်မင်န်သက်ဝင်ယုံကြည်သူအား ဒုက္ခဖြင့်စမ်းသပ်ပြီး ထိုအပေါ် အကျိုးကုသိုလ်ချီးမြင့်ကာ ၎င်း၏ အကုသိုလ်များကို ပယ်ဖျက်ပေးတော်မူသည်။ မှတ်ချက်။ အပြစ်အကုသိုလ်များကို ပယ်ဖျက်ပေးမည်ဟု ဆိုရာတွင် သေးငယ်သော အပြစ်များကိုသာဆိုလိုပြီး ကြီးလေးသော အပြစ်များကိုမူ စစ်မှန်သည့် (သောင်ဗဟ်)အမှားဝန်ချတောင်းပန်မှုပြုမှသာ ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။
မုအ်မင်န်တစ်ဦးထံ ဆိုက်ရောက်လာသော ရောဂါဝေဒနာများနှင့် အခြားသောစမ်းသပ်မှုများသည် နည်းပါးသည်ဖြစ်စေ သူ့အား အပြစ်အကုသိုလ်များမှ ကင်းစင်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း ဟဒီးဆ်တော်တွင်လာရှိသည်။
ဟဒီးဆ်တော်တွင် မွတ်စ်လင်မ်များအတွက် ကြီးကျယ်သော သတင်းကောင်းများ ပါရှိသည်။ ၎င်းမှာမည်သည့်မွတ်စ်လင်မ်မဆို (အကုသိုလ်များပလပ်ခံရရန်) ဤသို့သော ဒုက္ခအခက်ခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမည်ပင် ဖြစ်သည်။
ဤကိစ္စရပ်များဖြင့် အဆင့်အတန်းများမြင့်မားလာပြီး၊ ကောင်းမှုများ တိုးပွားလာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဟဒီးဆ်တော်တွင်ပါရှိသည်။
အပြစ်အကုသိုလ်များအား ပယ်ဖျက်ပေးခြင်းဟူသည် သေးငယ်သောအကုသိုလ်များဖြင့်သာ ကန့်သတ်ထားသည်။ ကြီးလေးသော အကုသိုလ်များကိုမူ အမှားဝန်ချတောင်းပန်မှုပြုလုပ်ရန် အရေးကြီးပေသည်။
ထွတ်မြတ်မှုများနှင့် အာဒါဗ်စည်းကမ်းများ။ . ထွတ်မြတ်မှုများ။ . သောင်ဟီးဒ်၏ ထွတ်မြတ်မှုများ။ .